December 30, 2011 by chowutyee
Posted in အခြား အကြောင်းအရာများ | 20 Comments
Food Magazine က ၀တ်ရည်ထုတ်တာ မဟုတ်ဘူး။ ၀တ်ရည်က ဟင်းချက်နည်းတွေနဲ့ တခြားဆောင်းပါးတွေပါ ရေးတာပါ။ ၀တ်ရည်က Food Magazine မှာ အယ်ဒီတာပါ… ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်နော်.. 🙂
Thanks Ko Aung Zaw! 🙂
Thanks Wah Wah! 😛
Thanks par Nandar 😀
ကျေးဇူးပါ မခင်ယမုံ။ အမြဲအားပေးလို့လည်း ၀တ်ရည်က ကျေးဇူးပါနော်။ Magazine မှာ လစဉ်ထည့်တဲ့ဟင်းတွေကိုလည်း Wutyee Food House ၀က်ဆိုက်မှာ ပြန်မျှဝေပေးသွားမှာပါ။ Thanks again! 🙂
Happy New Year Ma Chaw!!! Thanksalot.. 🙂
heeee Thanks my lovely twin! 🙂
Thanksalot Ma Theingyi! 🙂
ဟုတ်ကဲ့ ဒီ WutyeeFoodHouse မှာတင်ထားတဲ့ဟင်းတွေရော၊ Magazine မှာထည့်တဲ့ ဟင်းအားလုံး ၀တ်ရည် ကိုယ်တိုင် ချက်ထားတာပါ။ ကိုယ်တိုင် ချက်ပြုတ်ပြီမှ ချက်နည်းတွေကို သေချာရေးပြီ ပြန်မျှဝေပေးတာပါ။ စာအုပ်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ ကျေးဇူးပါနော်.. 😀